မြန်မာသံရုံး၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့မှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၁) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
မြန်မာသံရုံး၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့မှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၁) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
(၂၂-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၁) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားကို လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုနိုင်နှင့် ဇနီးတို့ ဦးဆောင်၍ ၁၇-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၈၃၀ နာရီတွင် လာအိုနိုင်ငံ၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ Don Chan Palace Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ လာအိုနိုင်ငံ အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Dr. Khampheng SAYSOMPHENG နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Sengphet HOUNGBOUNGVANG တို့က အဓိက ဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး စွမ်းအင်နှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Dr. Khammany SINTHAVONG၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Pol. Maj Gen Sinthavong XAYYAKONE ၊ မြန်မာ – လာအို ချစ်ကြည်ရေး အသင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Chanthavong SENGAMADONTY တို့က အထူး ဧည့်သည်တော်များအဖြစ် တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။
ထို့ပြင် လာအိုနိုင်ငံ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ အကြီးအကဲများ၊ လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဇနီးများ၊ စစ်သံမှူးများနှင့် ဇနီးများ၊ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် လာအိုနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ စုစုပေါင်း (၁၇၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဧည့်ခံပွဲတွင် အာရှ၊ ဥရောပ အစားအစာများအပြင် မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာများဖြစ်သည့် ကြက်သား ကြာဇံချက်နှင့် ငါးမုန့်ကြော်တို့ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။